R/W BORIS JOHNSON oo ka hadlay dabkii weynaa ee xalay baabi'iyay suuqa Hargeysa - Caasimada Online
Home Warar R/W BORIS JOHNSON oo ka hadlay dabkii weynaa ee xalay baabi’iyay suuqa...
R/W BORIS JOHNSON oo ka hadlay dabkii weynaa ee xalay baabi’iyay suuqa Hargeysa
London (Caasimada Online) – Raysal Wasaaraha UK Boris Johnson ayaa ka hadlay musiibada Dabka ee saameysay suuqii Hargeysa kaasoo dhaliyey khasaaro maaliyadeed oo xoog leh.
Boris Johnson ayaa ballan qaaday inay Somaliland siin doonaan wixii taageero ah oo ay awoodaan si ay uga soo kabato khasaaraha soo gaaray.
“Waxaan aad uga xumahay in aan aragno dhibaatada ka dhalatay dabka ka kacay suuqa furan magaalada Hargeysa oo ah halbowlaha dhaqaalaha magaalada, kaasoo saameeyay ganacsiyo badan”ayuu yiri Boris.
Dhinaca kale, xoghayaha Arrimaha dibadda Ingiriiska Liz Truss, ayaa qoraal ay barteeda Twitter-ka ku baahisay ku sheegtay in dabkii khasaaraha badan dhaliyay ee ka kacay suuqa magaalada Hargeysa ee Somaliland uu ahaa mid naxdin leh.
Liz Truss ayaa sheegtay in dowladda UK ay la shaqayn doonto Somaliland iyo saaxiibada caalamka si ay taageero ugu raadiyaan dadkii uu khasaaruhu gaaray.